Maraykanka, 05 November 2017
Axad 5 November 2017
Twitter-ka Trump oo hawada laga saaray
Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee @realDonaldTrump, ayaa dhowr daqiiqo hawada laga saaray habeenkii khamiista.
Mareykanka oo joojinaya Visa-ha nasiibka
Madaxweynaha Dowlada Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay inuu kala shaqeyn doono Koongareeska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa-nasiibka ee sanad walbaa ay kumannaan ruux ku yimaadaan Mareykanka.
Dacwado lagu soo oogay Sayfullo Saipov
Dacwad-oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa dacwado argagixiso kusoo oogay nin kasoo jeedo dalka Uzbekistan oo ku eedeysan inuu sideed ruux oo rayid ah gaari ku jiirsiiyay Talaadadi magaalada New York.
Nin Gaari Dad Ku Jiirsiiyay New York
Ugu yaraan sideed ruux ayaa ku dhimatay tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen, kadib marki uu nin waday gaari kuwa xamuulka ah uu jiirsiiyay dad ku dhax socday waddo aad mashquul u ah oo ku taalla magaalada New York ee dalkaan Mareykanka.
Xubno ka tirsanaa ololaha Trump oo dacwado lagu soo oogay